«Avenir manifik! » -
AccueilTresaka«Avenir manifik! »
«Avenir manifik! »
04/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Dia mihevitra ny tenany ho inona ireto mpianatra amin’ny ambaratonga faharoa nandeha nameno isa ny mpigrevy etsy amin’ny lapan’ny tanàna? Rehefa jerena hoe iza ireto mpianatra ireto dia ireo mpingitrika, ireo tsy mahay na inona na inona mitana ny laharana gisitra any am-pianarana fa ny mpianatra tena vonona ny hianatra sy manomana ny ho aviny kosa mandeha mamonjy fodiana, mamerin-desona any an-tranony, mifofotra manomana ny fanadinana afaka volana vitsy.
Tsy olana mihitsy na tsy hiverina any an-tsekoly intsony aza ireto mpianatra nidina an-dalambe ireto, mba mihena ny isan’ny mpianatra anaty kilasy iray, ary vita ho azy tsy nilana fanadinana akory ny fanilihana ireo vonon-kianatra sy ny mpivangabao, ary tokony ho izay rahateo koa no fepetra horaisin’ny talen-tsekoly. Toa tambatambazana hianatra izany mantsy ny sasany, mameno isa ny dabilio sy manakorontana ny ankizy manome lanja izany fianarana izany.
Mazotoa migrevy, mandehana eny amin’ny lapan’ny tanàna isan’andro. Tena ampirisihina mihitsy ireto mpianatra avy amin’ny sekolim-panjakana nihazo ny lapan’ny tanàna ireto mba tsy hiverina any an-tsekoly intsony. Tsy misy ilana azy ireo rahateo koa any am-pianarana, maro ny zana-bahoaka no maniry handrato fianarana tsy tafiditra any amin’ny sekolim-panjakana, kanefa tsy mahatakatra saram-pianarana any amin’ny sekoly tsy miankina.
Izao no mba hafatra kely ho an’ireto mpianatra mandeha migrevy ireto, rehefa eny ihany ianareo, mba anontanio ireo solombavambahoaka sy mpanao politika ireo hoe: « mba aiza ny zanakareo ireo izao? Migrevy ety an-dalambe ety koa ve ny zanakareo? ». Amin’izay angamba mety ho tonga saina ihany hoe « tena ataon’ny olona fitaovana fotsiny fa ny zanak’izy ireo milamindamina tsara ».
Ny ray aman-drenin’ireo mpianatra ataon’ireto mpanao politika ireto tohatra fiakarana no mampalahelo satria azo antoka mihitsy fa mifehy fehikibo ireo ray aman-dreny, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fanomezana vola kely isan’andro atao sakafo sy saran-dalana fotsiny ihany aza, tsy lazaina intsony ny fitaovam-pianarana sy ny fandaniana maro hafa. Ka tsy misy olana mihitsy e! Mandehana migrevy, ilaozy ny sekoly dia eny an-dalambe eny manorina « avenir manifik »!
Mitohy hatrany ny tetikasa fanatsarana an’Antananarivo. Omaly mantsy, dia tonga nitsidika ireo toerana nanombohana ny Tetikasa fanatsarana an’Antananarivo (PIAA) teny amin’ireo faritra iva, toa an’Amepfiloha, ny Fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny ...Tohiny